Akụkọ kacha ọhụrụ banyere Federal Auditors si Nigeria & ụwa | TAA
GlobalData: Nchịkọta ịba ọria bụ ihe dị adị n'ime afọ 15
Ụlọikpe Kasị Elu nke United States na-akwado ịkwado Donald Trump njem mmachibido iwu
APC: Onu ogugu ndi isi ochichi bu Buhari bu onye isi gomenti Oshimhole.
EFCC na-ejide ihe anọ site na mkpasu iwe na-ekwu na aghụghọ N359m
Gandish Ganduje na-enweta ala maka oru gọọmenti etiti gọọmentị
Naira na-adaba na dollar na windo ndị nwere ego
BDC na-akwalite inwe nghọta na azụmahịa
Dangote Cement na-eme atụmatụ ndepụta London n'ime afọ abụọ
INEC na-enyefe ndị ọrụ mgbasaozi 2,000 maka ọrụ ncheta Senator Melaye
Dbanj na-ekpuchi edemede ederede maka ndị na-eme ihe nkiri
Korede Bello: Ana m achọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ụbọchị tupu Mavin ...
Chimamanda Adichie: Eji m ajụọ m Hillary Clinton
Real Madrid kụrụ Bayern Munich na Allianz Arena
Diego Simeone: Diego Costa kwadoro egwu egwu Arsenal ugboro ugboro
Arsene Wenger: Mohamed Elneny ga-adị njikere maka iko ụwa
Alex Oxlade-Chamberlain Liverpool si na Cup Cup
US kọrọ na-enyocha Huawei n'elu Iran iwu imebi
NCC: Ntugharị mba ga-ejedebe nkewa di n'ime obodo
Ndozi Google Gmail maka ndị na-edebanye aha ịbanye
Ndị omekome Nigeria na-azụta ọtụtụ puku dollar site n'aka ndị ọrụ ụgbọ mmiri
Home Tags Federal Auditors
PTAD na-ezukọ, na-egosi na ezumike nká n'ụlọ ọgwụ
Ulo oru ugwo ulo oru ezumike nkita nke Delta Steel Company na Federal Housing Authority abanye na nke ndi ozo ndi isi oru na ndi na ezumike n'ulo ha.
Real Madrid ga-eme ka ndị ọkacha mmasị nwee ike ịbanye n'ikpeazụ Njikọ Njikọ mgbe ha meriri 2-1 gaa Bayern Munich na ụkwụ mbụ nke usoro ọmụmụ ha.
Òtù Ahụ Ike Ụwa na-eduga n'ememe Ụbọchị Ọrịa Ụwa na Wednesday, April 25th, nke isiokwu bụ, 'Njikere ịkụda Malaria'.
Ndị ọkàiwu na-ahụ maka ikpe na New York nọ na-enyocha ebe ọ bụ na ọ dịkarịa ala n'afọ gara aga ma ụlọ ahịa China nke Huawei Technologies Co. Ltd. mebiri iwu US na mmekọrịta ya na Iran, dịka usoro ndị maara nke ọma.
Ụlọikpe Kasị Elu nke US gosiri Wednesday nke ọma ma ọ bụrụ na President Donald Trump nwere ike igbochi ndị njem si mba isii kacha mba Muslim, na ule ikpe kachasị nke nchịkwa nke njem nlekọta.
Atletico Madrid nchịkwa Diego Simeone kwenyere na Diego Costa ga-enwe ike ịmaliteghachi ọgụ ya na Arsenal na Europa Njikọ nke ikpeazụ, nke mbụ na Thursday nke dị oke mkpa maka English.
Ivan Gazidis, onyeisi ndị isi nke Arsenal - onye ga - akwado onye ọchịagha ọhụrụ ka ọ bụrụ onye nwe Stan Kroenke - kwenyere na Mikel Arteta nwere ike ịbụ onye ga - anọchite anya Arsene Wenger, Sky Sports akụkọ.
Gọvanọ Okorocha: Ino ndị gọvanọ gọọmenti na-achịkwa na-eme atụmatụ
Gọvanọ Rochas Okorocha nke obodo Imo, ụnyaahụ, kwuru na ndị isi gọvanọ obodo, gụnyere Sam Mbakwe, Evan Enwerem, Achike Udenwa na Ikedi Ohakim aghaghị ịbụ ndị a tụlere banyere otú akụnụba ha si ghọọ, mgbe ha hapụrụ ọrụ dị ka ndị gọvanọ . O kwukwara na ha kwesịrị ka e nwee ekele.
Alexis Sanchez: Ịgbanwe ndụ na Manchester United siri ike
Alexis Sanchez kwuru na ọ siri ike na-eme mgbanwe maka ndụ na "nnukwu ụlọ" ebe ọ bụ na January ya si Arsenal pụọ na Manchester United, ma ọ na-atụ anya na nke ikpeazụ nke FA mgbe ọ kwụsịrị ihe mgbaru ọsọ na mmeri 2-1 n'elu Tottenham na Saturday.
Ụfọdụ ndị na-ere ọkụ eletrik arịọla Mgbakọ Mba ahụ ka ha mepụta iwu na-akwado ụlọ ọrụ ikuku eletrik (Discos) iji wụnye mita ndị a kwụrụ ụgwọ maka ndị ahịa niile iji chekwaa ndị ahịa site na ịgba ụgwọ ụgwọ.
Ndi Rom amabila "omume obi ojoo" nke ndi ozo mgbe e meriri onye agha na-akwado Liverpool n'ihu Njikọ nke Njikọ na nke ikpeazụ.